ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း အဆိုပြုလုပ်ခ အကြံပြုချက်နှုန်းထား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် နောက်ဆုံးထား တင်ပြ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း အဆိုပြုလုပ်ခ အကြံပြုချက်နှုန်းထား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် နောက်ဆုံးထား တင်ပြ?
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ဝ
အဆိုပြုလုပ်ခကျပ် ၄၈ဝဝ အပေါ် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားတို့၏ကန့်ကွက်ချက်များကို ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပြီး နောက်အကြံပြုချက်နှုန်းထားကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးအမျိုးသားကော်မတီသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားကော်မတီမှ ကြေညာထားသည့်အဆိုပြုလုပ်ခ ကျပ် ၄၈ဝဝ နှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကန့်ကွက်မှုပေါင်း ၂၅ဝဝ ကျော်တက်ခဲ့ရာ ယင်းကန့်ကွက်ချက်များကိကြားနာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ”အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနှစ်ဖက်ကြားနာပြီးပြီ၊ ရရှိတဲ့အချက် တွေကို အမျိုးသားအဆင့်ကိုတင်ဖို့ အစီရင်ခံစာရေးနေပါတယ်။ အကြံ ပြုချက်နှုန်းထားကတော့ ပြောလို့ မရသေးဘူး။ ၁၆ ရက်နောက်ဆုံးထားတင်ပြသွားမယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဦးဇော်အေးမောင်ကပြောသည်။ လုပ်ခသတ်မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ အမျိုးသားကော်မတီအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကော်မတီများကို ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်အထိ ရက်ပေါင်း ၃ဝ အတွင်း အကြံ ပြုချက်များတင်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
ယင်းကြောင့် ကန့်ကွက်မှုများရှိခဲ့သည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် အမီအကြံပြုချက်များကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး တင်ပြချက်များအပေါ် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးအမျိုးသားကော်မတီဝင်များ အစည်းဝေးထိုင်ကာနှုန်းထားထပ်မံအတည်ပြုပြီး ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၏အနည်းဆုံးလုပ်အားခကို ပြောင်းလဲသတ် မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် လုပ်ခအတည်ပြု သတ်မှတ်ချက်သည် လာမည့်မတ်လတွင် ထွက်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးလုပ်ခ ကျပ် ၃၆ဝဝ ပင် မရရှိသေးသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ အလုပ်သမားများအနေဖြင့်လည်း တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းဝန်ကြီးက ပြောသည်။ ”ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တုန်းက သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့တစ်ရက်ကို ကျပ် ၃၆ဝဝ ကိုတောင် ဒီနေ့အထိမပေးတဲ့ စက်ရုံတွေရှိတယ်လို့အလုပ်သမား တွေကတင်ပြတာရှိတယ်။ အဲဒါ တွေကို ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါ။ ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူပါ့မယ်။ တချို့က ကြိတ်ခံနေတယ်၊ မတိုင်ဘူး။ မတိုင်တော့ ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ မသိတော့ အရေးယူလို့ မရဘူး။ လာတိုင်လို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံတော်ကတစ်ရက်ကို ကျပ် ၃၆ဝဝ ပေးရမယ်လို့ ပြောထားရဲ့သားနဲ့ မပေးလို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးကပြောသည်။
(၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ် တတိယအကြိမ် မြန်မာ့ရိုးရာ နွားလှည်းပြိုင်ပွဲ ကျင်?
ရော့ဘ်ဒီလာနေး၏ နှစ်နှစ်အရွယ် သား ကင်ဆာရောဂါ ဖြင့်ကွယ်လွန်
ပြည်နယ်လေးခုမှ လူဦးရေရှစ်သိန်းကျော်၏လိုအပ်ချက်ကို ယခုနှစ်တွင် ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကန်ဒေါ်လာ?
ကလေးဒေသထွက် စိန်တလုံးနှင့် ပတ္တမြားသရက်သီးများ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်က အများဆုံ
အိုဇေး၏ဂိုးဖန်တီးပေးမှုစံချိန်ကို ချိုးဖျက်ရန် ဒီဘရိုင်းအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နေ ၊ ခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးနောက် ယခုရာသီတွင် ဆာနေးပြန်ကစားနိုင်ကြောင်း ဂွါဒီယိုလာအတည်ပြု
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖိတ်ကြားထားပြီး ယင်းခရီးစဉ်တွင် ပြ
လုပ်သား အခက်အခဲရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ စပါးစိုက်ခင်းများကို စက်ဖြင့် ရိတ်သိ